အခမ်းအနားများ | Center for Peace and Reconciliation
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး စင်တာ
Center for Peace and Reconciliation
မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှ သင်ခန်းစာများ စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ
ဦးအောင်နိုင်ဦး ရေးသားသော မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှ သင်ခန်းစာများ (မြန်မာဘာသာ) စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်၌ ....
အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး သီအိုရီ နှင့် လက်တွေ့ ဆွေးနွေးပွဲ
အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး သီအိုရီ နှင့် လက်တွေ့ ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ (၂၀) ရက်နေ့တွင် မြိတ်မြို့ ဂရင်းဟေးဟိုတယ်၌ ....
Book Launch – “ Pathway to Peace, an Insider’s Account of the Myanmar Peace Process” (English Version)
CPR ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးအောင်နိုင်ဦး ၏ Pathway to Peace, an insider’s account of the Myanmar Peace Process (English Version) စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ ....
“ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ပြဿနာများ၊ တိုးတက်မှုများနှင့် မျှော်လင့်ချက်များ” စာအုပ်နှင့် “ ဖယ်ဒရယ်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ” စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးစင်တာ (Center for Peace and Reconciliation) အနေဖြင့် “ ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ” စာအုပ် နှင့် “ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ပြဿနာများ၊ တိုးတက်မှှုများနှင့် မျှော်လင့်ချက်များ” စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက်နေ့တွင် နိုဗိုတယ် ဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် တက်ရောက်လာသူများမှ စာအုပ်နှင့် ပါတ်သက်၍ မုဒိတာစကားများ ....
မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှ သင်ခန်းစာများ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား
Center for Peace and Reconciliation – CPR နှင့် Centre for Peace & Conflict Studies(CPCS) ( Cambodia ) တို့ ပူးတွဲပြု လုပ်သော ဦးအောင်နိုင်ဦး ရေးသားသည့် Lessons Learned from Myanmar’s Peace Process (English Version) ....
Insider Mediation Workshop
CPR နှင့် Clingendael Organization တို့မှ ပူးတွဲပြုလုပ်သည့် “ Insider Mediation Workshop” ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ နိုဗိုတယ် ဟိုတယ်၌ ကျင်းပ ....
CPR နှင့် ဆွစ်ဇာလန်သံရုံးတို့ ပူးပေါင်းပြုလုပ်သော “ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၁) ရက်နှင့် (၂၂) ရက်နေ့တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့ နိုဗိုတယ် ဟိုတယ်၌ ....
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့မှ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားပြုသူများကို ဖိတ်ကြား၍ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သိထိုက်သော အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတများနှင့် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အကျိုးဆောင် ကဏ္ဍ၌ စနစ်တကျ ပါဝင်နိုင်ရန် Facilitation နှင့် ပတ်သက်သည့် နည်းစနစ်များကို သင်ကြားပို့ချပေးသော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ....
အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်သော Facilitation Training ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ (၄) ရက်မှ (၇) ရက်နေ့အထိ Center for Peace and Reconciliation တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းသို့ နေရာဒေသအစုံမှ ကရင် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်း ....
Meeting with Kayah State Peace Monitoring Network
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့တွင် ကရင်နီ (ကယား) အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ကယားပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကွန်ယက် (Kayah State Peace Monitoring Network – KSPMN) မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ....
© 2019-2022 Center for Peace and Recounciliation (CPR). All Rights Reserved. Web Design by NetScriper